डान्स क्लास नलिएरै बेली डान्सर
मनोरञ्जन , अन्तर्वार्ता , कला - साहित्य
डान्स क्लास नलिएरै बेली डान्सर भन्छिन् : मेरो माइण्डमै डान्स छ
मनोज कुमार शनिवार, चैत्र ३०, २०७५, १६:१२:०० मा प्रकाशित
काठमाडौं । नेपाली बेली डान्सरको रुपमा परिचित मोडल हुन्, विनु शाक्य । विनु बेली डान्समा प्रखर छिन् । विशेष गरि स्टेजमा आफ्नो बेली डान्सबाट दर्शकको मन जित्न सफल भएकी उनको बेली डान्स हेरेर मख्ख नहुने सायदै कमै होलान् । उनलाई बेली डान्सर भनेर चिनिए पनि उनीमा बलिउड डान्स, कत्थक, टिपीकल झाउरे, कन्ट्यामप्रोरीमा विशेष दक्खल छ ।
पछिल्लो समय उनी मोडलिङ र बेली डान्सलाई एकैसाथ अँगाल्दै आएकी छिन् । स्टेज कार्यक्रममा त उनलाई भ्याई नभ्याई छ । विभिन्न जिल्लामा हुने कार्यक्रममा उनको उपस्थिती अनिवार्य जस्तै हुन थालेको छ अचेल । नृत्यमा विषेश क्षमता भएकी विनु पत्रकारिता र अंग्रेजी साहित्यमा स्नातकोत्तर गरिसकेकी छिन् ।
गायक दुर्गेस थापाको ‘सकिन जुन छुन’ बोलको गीतबाट मोडलिङमा डेब्यु गरेकी शाक्य अहिले म्युजिक भिडियोमा व्यस्त हुन थालेकी छिन् । बेली डान्सर विनुसँग जनतापाटीले गरेको कुराकानी सम्पादित अंशः
दैनिकी कसरी वितिरहेको छ ?
डान्सकै कार्यक्रमहरुमा बढी सयम बित्ने गरेको छ । म डान्सकै गतिविधिमा दिनभरी व्यस्त हुने गरेको छु ।
तपाई मोडलिङसँगै डान्सपनि गर्नुहुन्छ ? मोडलिङमा प्रवेश कसरी गर्नु भयो ?
म बच्चादेखि डान्समा अतिनै रुचि राख्ने गर्थे । डान्स गर्दै जाँदा विस्तारै कलाकारिता क्षेत्रका व्यक्तित्वहरुसँग चिनजान भयो । आठ वर्ष अघि मेरो एकजना साथी रेकर्डिङ स्टुडियोमा काम गथ्र्यो । साथीले उक्त गीतमा मोडलिङ गर्न आग्रह गरेको थियो । सधै डान्स गरिरहेको म, ठिकै छ नि त भनेर कुरै कुरामा गायक तथा मोडल दुर्गेस थापाको ‘सकिन जुन छुन’ बोेलको गीतबाट मोडलिङमा डेब्यु गरेकी हुँ ।
मोडलिङ गरिसकेपछि कस्तो प्रतिक्रिया पाउनु भयो ?
अहिले ठ्याक्कै याद त छैन । तर, दर्शकबाट राम्रो प्रतिक्रिया पाएको थिए । करिब आठ वर्षअघि पहिलो पल्ट मोडलिङ गर्दा घरपरिवार तथा साथीहरुले पहिलो प्रयास राम्रो भएको छ, भनेका थिए । जानी नजानी अभिनय गरियो । त्यसबेला राम्रै गरे जस्तो लाग्छ ।
काठमाडौँ आउनुको उद्देश्य के थियो ?
सिन्धुपाल्चोकमा कक्षा १२ सम्मको पढाई सकिएपछि स्नातक तहको अध्ययनका लागि काठमाडौँ आए । यहाँ पढ्न भन्दापनि मेरो उद्देश्य डान्स सिक्नु थियो । डान्स गर्नेका लागि हाम्रो ठाउँमा अवसर नहुने भएकाले अवसरको खोजी गर्न काठमाडौँ आएको थिए । सिन्धुपाल्चोकमा एउटा पनि डान्स सेन्टर नभएकाले यही आएर डान्सलाई कसरी अगाडि बढाउने, कसरी डान्समा सहभागी हुन पाइन्छ भनेर आएको हुँ । मेरो पहिलो उद्देश्य भनेको पढाईभन्दा पनि डान्समै करियर बनाउने । पढाई भन्दापनि मेरो माइन्डमा डान्स नै थियो ।
डान्स र मोडलिङमा के फरक छ ?
मोडलिङले डान्सलाई पनि समेट्छ । किनभने डान्स पनि मोडलिङको पाटो हो । म्यूजिक भिडियो धेरै जसो डान्सिङ खालको हुन्छ । मेलै अहिलेसम्म दुई दर्जन म्यूजिक भिडियो गरिसकेको छु । त्यसमा धेरै जसो डान्सिङ खालको छ । डान्सले मोडलिङलाई पनि सहयोग गर्छ । यी दुई एक अर्काको सहयोगी हुन् ।
मोडलिङ गर्न डान्स अनिवार्य हो ?
अनिवार्य त होइन । तर, डान्स सिकेर गर्दा राम्रो हुन्छ । किनभने मोडलिङको पनि कस्तो विधा भन्ने हुन्छ । रोमान्टिक र विरह खालको हुन्छ । आफू कस्तो रोज्ने त्यसमा भर पर्छ, आफै निर्णय गर्ने हो । सबै सिकेर आउँदा अरुलाई भन्ने बाटो हुँदैन । आफूलाई नै प्लस प्वाइन्ट हुन्छ । राम्रो पनि हुन्छ, तर अनिवार्य नै होइन ।
डान्स गरेको कति वर्ष भयो ?
म ५/६ वर्षको उमेर हुँदादेखि नै डान्स गर्दै आइरहेको छु । अहिले डान्स गरेको २० वर्ष नै भइसक्यो । मोडलिङमा भने ८ वर्ष भयो ।
२० वर्षअघिको डान्सको प्याट्रन र अहिलेको प्याट्रनमा के फरक छ ?
धेरै फरक भइसक्यो । पहिला हाम्रो पालामा इमेल इन्टरनेटको सुविधा थिएन । क्यासेट, सिडी र डिभिडी प्लेयरमा डान्स सिकेको हुँ । आजसम्म शिक्षकसँग डान्स सिकेको छैन । आफै अभ्यासन गर्दै सिकेको हुँ । अहिले युट्युब हेरेर डान्स सिक्न सकिन्छ । संसारमा डान्स आइटम यतिधेरै आइसक्यो कि कतिपय आईटम डान्स कुन हो भनेर मलाई नै छुट्याउन गाह्रो हुन्छ । त्यसैले अहिले धेरै फरक छ ।
बेली डान्सर भनेर तपाई परिचित हुनुहुन्छ । बेली डान्स भनेको के हो ?
बेली डान्समा विशेषगरी पेटको मुभमेन्ट बढी हुन्छ । त्यही भएर यसको नाम बेली डान्स रहन गयो । बेली डान्स सबैले गर्नुहुन्छ । सामान्य रुपमा जो पनि बेली डान्सर हो । म पनि बेली डान्सर हो र ? भनेर मेरो डिमागमा कति कुराहरु चल्थ्यो । पछि मैले पनि यसमा केही गर्नुपर्छ भनेर यसमा फोकस गरेको हुँ । अरु डान्सभन्दा यो डान्स गर्न अलि गाह्रो पनि छ । किनभने आफ्नो शरीरलाई जति सकिन्छ त्यति लचिलो राख्न सक्नेले मात्र यो डान्स गर्न सक्छन् । मैले बेली डान्सको बारेमा ठ्याक्कै यही हो भनेर भन्न सक्दिन । यो डान्स बाहिरी देशबाट आएको हो । नेपालमा भने बल्ल पाइला सार्दै छ । चार/पाँच वर्षपछि बेली डान्स यो हो भन्न सकिन्छ होला की ? सायद केही सयमपछि राम्रो होला । डान्स सेन्टर तथा युट्युबाट हेरेर पनि सिक्न सकिन्छ ।
बेली डान्स कहाँ सिक्नु भयो ? दैनिक कति घण्टा अभ्यास गर्नु हुन्छ ?
यहाँ बेली डान्स सिकाउने राम्रो ठाउँ छैन । मेलै युट्युबाट हेरेर नै सिकेको हुँ । जति सिकेको छु सबै युट्युबाट हेरेर नै सिकेको छु । अब बेली डान्स सिक्न इन्डिया अथवा बाहिर जाने सोंचमा छु ।
म नाच्दै नाच्दिन । जब कार्यक्रम आउँछ त्यसपछाडि दुई/तीन दिन छ भन्दा भन्दै बल्ल अभ्यास गर्न थाल्छु । यो बानीलाई सुधार्र्ने प्रयासमा छु ।
मेरो फिटनेसको कुरा गर्दा खासै त्यस्तो एक्सरसाईज त गर्दिन । एक समय यस्तो मुड चलेको थियो कि विहानै उठेर रनिङसनिङ गरिन्थ्यो तर अहिले खासै गर्दिन् । शरीलाई डान्स गरेर नै शरीरलाई फिट्नेस राख्ने गरेको छु ।
डान्स पेशालाई अहिले पनि सहजरुपमा समाजमा स्वीकार गरेको पाइँदैन । त्यसमा पनि छोरी मान्छेले डान्स गरी भने झन् नराम्रो दृष्टिले हेर्ने गरिन्छ । के समाजमा अहिले पनि डान्सलाई त्यस्तो नजरले हेर्ने गरेका छन् ?
पहिलाको मान्छेहरु कमै पढेलेखेको हुनुहुन्थ्यो । उहाँहरुले सोच्ने तरिका अलिकति फरक नै थियो । अब समय परिवर्तन हुँदै गयो । पहिलाको तुलनामा अहिले धेरै परिवर्तन भएको छ । मेरै कुरा गर्दा पनि यति ठूली भइसकी के नाचेर हिडेकी भन्थे । बच्चा बेलामा नभने पनि ठूली भइसकेपछि कुरा काट्ने गर्थे तर अहिले त्यही ठाउँमा जाँदा ओहो कस्तो राम्रो नाचेकी भनेर भन्ने गरेको सुन्दा खुसी लाग्छ । अहिले डान्सलाई हेर्ने नजर सकरात्मक भैसक्यो ।
डान्स गरेर जीवन धान्न सकिन्छ ?
आफ्नो उमेर छउन्जेल पो डान्स गर्ने हो । तर, डान्स नै गरेर आफ्नो जीवन चल्छ भन्नुभन्दा पनि आफू कसरी सुरक्षित हुने । त्यसतर्फ सोच्नु पर्ने हुन्छ । अब कोरियोग्राफर गरेर गर्ने की आफ्नै व्यवसाय गर्ने त्यसतर्फ पनि सोच्न सकिन्छ । महोत्सवको समयमा डान्स गरेर आर्थिक आर्जन गर्न सकिन्छ तर डान्सको सिजन नभएको बेला आफ्नो सेक्युरका लागि अन्य स्रोत पनि अपनाउन सकिन्छ । डान्स नै गरेर जीवन चल्न गाह्रो हुन्छ जस्तो लाग्छ मलाई ।
स्टेज कार्यक्रमहरुमा कतिवटा गीतमा डान्स गर्नु हुन्छ ? पारिश्रमिक कति लिनुहुन्छ ?
स्टेज कार्यक्रमहरुमा मैलै समान्यतया दुई वटा गीतमा डान्स गर्ने गरेको छु । कहिलेकाही आयोजकले धेरै अनुरोध गरेपछि तीन वटासम्म गर्नेगर्छु । १५ मिनेट देखि ३० मिनेटसम्म डान्स गर्दा थाकिसकेको हुन्छु तर आयोजकहरुले अर्को गीतमा पनि नाच्न अनुरोध गरेपछि निर्णय गर्न गाह्रो हुन्छ । आफ्नो प्रस्तुति सकिसकेको हुन्छ । फेरी स्टेजमा गएर यतिकै उभिएर त हुँदैन । त्यसबेला अफ्ठ्यारो हुन्छ । यसपालिको होलीको प्रोगाममा आधा घण्टासम्म ननस्टप बेली डान्स गरिदिन भन्नुभयो मैलै गर्दिन भने । म डिजे र गायक त होइनन् नि ?
पारिश्रमिकको कुरा गर्दा समान्यतया १५ हजारदेखि ५० हजारसम्म लिने गरेको छु ।
भविष्यमा योजना के छ ?
बेली डान्समा करियर बनाउने सोच छ । साथै भविष्यमा टेलिभिजन कार्यक्रम संचालिका भएका काम गर्ने सोच छ ।
मनोज कुमारबाट थप
पर्यटक आकर्षित गर्दै सुनसरीको बर्जु ताल बिहिवार, आश्विन ११, २०७५, १५:१८:००
यी हुन् मन्त्रिपरिषद् बैठकको निर्णय बिहिवार, माघ ३, २०७५, १९:२३:००
११ गते चिकित्सा शिक्षा विद्येयक पास हुन्छ : भट्टराई बुधवार, माघ ९, २०७५, १७:२०:००
भारतलाई मनिषा कोइरालाको जवाफः ‘श्रम बेचेको हुँ स्वाभिमान होइन’
'अमेरिकन आइडल'को उपविजेता बने दिवेश
अर्बपतिको सूचीमा रिहाना